ချွေးပေါက်ကျဉ်းပြီး တင်းရင်းတဲ့အသားအရေဖြစ်စေဖို့ ~ လူဗိုလ် ဟူသည် ...
Author: lubo601 | 5:11 PM | No မှတ်ချက် |
သင့်ချွေးပေါက်တွေဟာ မှန်ဘီလူးအောက်ရောက်နေသလို ကျယ်နေလို့ စိတ်ညစ်နေလား??? စိတ်မညစ်ပါနဲ့။ ချွေးပေါက်ကျဉ်းစေတဲ့ လွယ်ကူတဲ့နည်းလေးတွေရှိပါတယ်။ ချွေးပေါက်လေးတွေ ပြန် ကျဉ်းအောင်က အပေါ်က ချွေးပေါက်ကျယ်စေတဲ့အကြောင်းတွေကိုလည်း သတိထားရပါမယ်။
- အဆီပိုတွေနဲ့ ဆဲလ်သေတွေကြောင့် ချွေးပေါက်တွေပိုကျယ်လာစေပြီး ၀က်ခြံတွေလည်း ဖြစ်စေတော့ အသားအရေကို သေချာသန့်စင်ပေးဖို့ အရေးကြီးတယ်နော်။
- တစ်ရက်ကို ၂ ကြိမ် ကိုယ့်အသားအရေနဲ့ အဆင်ပြေတဲ့ Facial Cleanser နဲ့ မျက်နှာသစ်ပေးပါ။
- နေရောင်ခြည်က အသားအရေရဲ့ တကယ့်ရန်သူပဲနော်။
- နေကာမျက်မှန်၊ ထီး၊ ဦးထုပ်ပါမှ အပြင်ထွက်ကြမယ်လေ။
- သင့်အရေပြားလေး ကောင်းကောင်းအသက်ရှုပါစေလား။
- ရေမြုပ်၊ ဘရှပ်တွေပေါ်မှာရှိနေတဲ့ အဆီတွေ ဘက်တီးရီးယားတွေဟာ သင့်ချွေးပေါက်တွေထဲကို ၀င်ပြီး ကောင်းကောင်းဒုက္ခပေးနိုင်တယ်လေ။
- ရယ်ဒီမိတ်စားစရာတွေ၊ အချိုတွေ၊ အဆီအဆိမ့်တွေ၊ ကော်ဖီတွေက အရေပြားက အဆီထုတ်လုပ်မှုကို များစေလို့ ချွေးပေါက်ထဲမှာ အဆီတွေကြောင့် ချွေးပေါက်ပိုကျယ်လာစေသလို ချွေးပေါက်ပိတ်ပြီး ၀က်ခြံတွေပါ ဖြစ်စေနိုင်လို့ ဝေးဝေးက ရှောင်ရမယ်နော်။
ချွေးပေါက်လေးတွေ ပြန်ကျဉ်းစေမယ့် သဘာဝရဲ့စွမ်းအားများ
ဆဲလ်အသေတွေကို ပုံမှန်ဖယ်ရှားခြင်းဟာ ချွေးပေါက်တွေကို ပြန်ကျဉ်းစေမယ့် အကောင်းဆုံးနည်းပါပဲ။ ဆဲလ်အသေတွေကို ဖယ်ရှားတာကို အိမ်မှာပဲ သဘာဝပစ္စည်းတွေနဲ့ လုပ်လို့ရတယ်နော်။
- ဒါမှ ချွေးပေါက်တွေကို ပွင့်စေပြီး ဆဲလ်သေတွေကို ထိထိရောက်ရောက် ဖယ်ရှားပေးနိုင်စေပါတယ်။
ချွေးပေါက်လေးတွေကျဉ်းစေတဲ့ အကုန်အကျလည်းမများ လွယ်ကူအစွမ်းထက်တဲ့ သဘာဝပစ္စည်းတွေနဲ့ ပေါင်းတင်နည်းတွေကိုလည်း လေ့လာကြည့်ရအောင်..။
- မျက်နှာနဲ့ လည်ပင်းကို ခြောက်သွေ့အောင် သုတ်ပြီးတဲ့အခါ သင့်ချွေးပေါက်လေးတွေကျဉ်းပြီး နူးညံ့ချောမွေ့နေတဲ့ မျက်နှာလေးကို တွေ့ပြီး သင်လည်း အရမ်းကို ပျော်ရွှင်သွားမှာနော်။
- ၃၀ မိနစ်ကြာတဲ့အခါ ရေနွေးလေးနဲ့ ဆေးချပြီး အစိုဓာတ်ထိန်းခရမ်တစ်ခုခု လိမ်းပေးလိုက်ရင် ချွေးပေါက်လေးတွေကျဉ်းပြီး လန်းဆန်းချောမွေ့နေတဲ့ မျက်နှာလေးကို ရရှိပါလိမ့်မယ်နော်။
- အရမ်းလွယ်တယ်နော်.. ဒါပေမယ့် အရမ်းလည်း အစွမ်းထက်ပါတယ်။
- အားလုံးအတွက် အသုံးတည့်မှာပါနော်။
ရင်နှင်းအပေါ်မှာ ပြောပြခဲ့တာလေးတွေကို သေချာလိုက်လုပ်ပေးရင် ချွေးပေါက်လေးတွေ တဖြည်းဖြည်းကျဉ်းလာမယ့်အပြင် အသားအရေလည်း တကယ်ကို လှလာမှာနော်။ ချွေးပေါက်တွေကျဉ်းပြီး တင်းရင်းချောမွေ့လှပတဲ့ မျက်နှာလေးကို မြန်မြန်ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေရှင်။ :pray
credit >>>Myanmar Health & Beauty
▼ 2013 (4431)
နာကျင်နိုင်သော မေတ္တာရှင် .......
ကွန်ပျူတာကို ဝယ်ကစလို မြန်စေချင်တယ်ဆိုရင်
အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာသူတို့ ရင်ဆိုင်ရမည့် အကြီးမားဆုံးစိန...
ဖေ့စ်ဘုတ် ကာတွန်းစုစည်းမှု (၂၉-၆)
တစ်ခြားတစ်ဖက် ( other sight )
" အမျိုးစောင့် ဥပဒေနှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ဗမာမိန်းကလေးတ...
“ရှစ်နှစ်လောက်ကတည်းက တစ်ပင်ကို သုံးသိန်းလောက် တွက်...
`` ပန်ပါရလို့ ပန်ရလျှင်လည်း ပန်းများသခင် ဂေါ်သဇင်ဟု...
ဘက်ဂျက်နဲ့ ဦးပိုင် အတွက် အဆိပ်တက်နေသူများဖတ်ဖို့
မျိုးစောင့်ဥပဒေကို မျိုးစောင့်ဥပဒေလို့ မြင်ပါဘူး
Facebook ရဲ့ ၁၅ စက္ကန့် ရုပ်သံခြေလှမ်း
`` လူနှင့် နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ ဂေဟဗေဒ အတွေးလေးများ ....
`` Ecology..... (သို့မဟုတ်) ဂေဟ ဗေဒ ´´
“ အိမ်ပြန် ငါး… ”
အိမ်ထောင်ရှင်မ ဖြစ်တော့မည့် ၀ိသာခါကို သူ့မိဘများ မ...
"တက္ကသိုလ်နောက်ခံ ဗယာကြော်ဇာတ်လမ်း" (မင်းလူ)
ယဉ်ကျေးမှု၏ သားကောင်များနှင့် ကျနော်ဖတ်မိသော စာအုပ်...
မိန်းကလေးများ အလေးမထားမိသည့် ကျန်းမာရေး ထိခိုက်စေန...
* ရုပ်ကိုလှအောင်ပြင်သလို စိတ်ကိုလည်း လှအောင်ပြင်ဖိ...
အိမ်ထောင်ရေး ဆိုတာ ....
လူ နှင့် စိတ်
ထိုင်းနိုင်ငံ တက္ကသိုလ်ပညာရေးအတွက် စီမံချက် အသစ်
သမိုင်းတလျှောက်အကောင်းဆုံး Jazz သီချင်းများ...(၁)
ဘုရင် နှင့် သူတော်စင် ပုံပြင်
""တရားရှုမှတ်မှုအပေါ် သိပ္ပံအမြင်ဖြင့် ချည်းကပ်ခြင်း""...
ဖေ့စ်ဘုတ် ကာတွန်းစုစည်းမှု (၂၅-၆)
သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာ - ခင်မောင်ဇော်
မိုးသည်း ည လမ်းခွဲ (အပိုင်း-၁)
မနေ့ကနဲ့ ဒီကနေ့ ...
" နှလုံးသားအရင်းအနှီး " ကိုရန်နိုင်
“ မောင်ပိန်လို မလုပ်ကြေး”
"သီချင်း၏ အနုပညာရသကို ပံ့ပိုးပုံဖော်ကြသည့်ဂီတမှူးမ...
မောင့်ချစ်သူ ( MTV ) သားသား
Alarm of Myanmar
သမထနှင့် ၀ိပဿနာ ( အားထုတ်ယောဂီများ သိသင့်သည်)
ပန်းခင်းလမ်းလျှောက်ချင်ရင် နိုင်ငံရေး မလုပ်ပါနဲ့.....
အကြွင်းမဲ့ လွတ်လပ်သော အခြေခံဥပဒေ
“ရတနာ မြေမှာ ရှာမတဲ့လား”
သစ်ထူးလွင် သတင်း စုစည်းမှု (၂၄-၆)
what what myanmar?
If you are not in my shoes, don't try to judge it
ကတ္တရာ လမ်းပေါ် နွားလှည်းမမောင်းရ.....
မှန်ကန်သော တက္ကသိုလ်တစ်ခု ရွေးချယ်ခြင်း
နောက်ဆို ကျွန်တော် သေချာပါ့မယ်
မျိုးစောင့်ဥပဒေအား ဝေဖန်ဆန်းစစ် သုံးသပ်ခြင်း
မငယ်ရဲ့ ကောက်ညှင်းဆန် ပန်းချီ
“ ဒုက္ခပါပဲ ဒကာမကြီးရာ ”
`` မိုးတွေလည်း ရွာနေပါစေ.....´´
ဘုရားသားနှင့် ကျားကွက် ကစားမည်လော......
အိတ်တစ်လုံး အကြောင်း အက်ဆေး
သူငယ်ချင်း ဘိုင်ဖရိထံ ပေးစာ